48 Carriers kwụ sooks ịkpa Machine BFB36W-114D
Introduction BFB-B vetikal akpaka sooks ịkpa igwe usoro (BFB-90 110 114 130 140 160 200 300) bụ a ọhụrụ set nke akpaka ịkpa ngwá nke bụ imewe na mma dabeere na gbarie na-adọrọ mba ọzọ elu technology. The igwe na ọtụtụ-eji ụlọ ọrụ nke na-emepụta wires .cable .weaved roba akpa nke idi elu nsogbu .weaved roba mmiri sooks .weaved ropes.tubes eji ụgbọala na moto anyịnya igwe na roba & plastic akpa na sprayer Teflon sooks elu pressu ...
BFB-B vetikal akpaka sooks ịkpa igwe usoro (BFB-90 110 114 130 140 160 200 300) bụ a ọhụrụ set nke akpaka ịkpa ngwá nke bụ imewe na mma dabeere na gbarie na-adọrọ mba ọzọ elu technology. The igwe na ọtụtụ-eji ụlọ ọrụ nke na-emepụta wires .cable .weaved roba akpa nke idi elu nsogbu .weaved roba mmiri sooks .weaved ropes.tubes eji ụgbọala na moto anyịnya igwe na roba & plastic akpa na sprayer Teflon sooks elu nsogbu. The igwe nwere fellowing atụmatụ:
1) High akpaka n'ókè gbajiri, efu bobbin ma ọ dịghị tube akpaka igwe onwe-emechi
2) ịmụta mgbanwe ọsọ ịnabata pitch, adịghị mkpa ịgbanwe gia
3) High mmepụta arụmọrụ mmepụta ugboro atọ karịa ugbu mbụ igwe kwa hour, na-max mmepụta iru 98m / hour
4) Low mkpọtụ, nnyefe na Anam Udeme usoro ịmụta adọrọ ụda, mbenata shake na inserting akụrụngwa.
5) Easy mmezi, nnyefe mgbanwe Ọdịdị mfe wụnye na wepu
6) Spindle ịmụta na-agbanwe na mgbanwe na ngwá, depentable ọnọdụ, mfe, adaba na mgbanwe wụnye bobbin
7) Obere abrasion na ogologo iji ndụ iri akụkụ-eji magburu onwe ihe ịmụta okpomọkụ omume na mmanu akụrụngwa.
1 Ọdụdọ ọkọnọ 380V / 3PHASE / 50 / 60HZ
2 Motor ike 2.2KW
3 ụgbọelu RPM 35RPM
4 sooks od 15-36MM
5 ịkpa ọsọ 1Meter / min
6 ụgbọelu nke ukwu 36pcs
7 Bobbin size 56 + 22 * ​​170mm
8 ụgbọelu erughị ala 0.4-5kg
9 Ẹtop mgbanwe site ntuziaka
10 ngwa Change spindle nwere ike ịkpa waya waya
Previous: Lezienụ Off Machine BFFJ-1100
Osote: 24 Carriers 140mm kwụ ịkpa Machine BFB24W-140CF
Ọla kọpa Waya ịkpa Machine
Igwe anaghị agba nchara Waya Braider
Igwe anaghị agba nchara Waya ịkpa Machine
Vetikal ịkpa Machine
Vetikal traction sooks Automatic ịkpa Mach ...
Vetikal Automatic sooks ịkpa Machine 24L-114BF